ကြမ်းတမ်းသော ကိုယ်နှုတ် အမူအရာများကို ရှောင်ရှားကြရန် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို ပြည်သူ့ - Yangon Media Group
ကြမ်းတမ်းသော ကိုယ်နှုတ်အမူအရာများကို ရှောင်ရှားရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်က သတိပေးလိုက်သည်။ ဇွန် ၄ ရက်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ကျောက်ဖြူမြစ်ကမ်းတွင် ခေတ်မီဆိပ်ကမ်းတည် ဆောက်ပေးရေးနှင့် ကန်ပေါက်၊ ဧရာဝတီနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင် ကျောက်ဖြူတွင်ဆောင်ရွက်မည့် လျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြီးလေးခုလုပ် ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်းအပေါ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိ မရှိနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျောက် ဖြူမဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန်နှင့် မင်းကင်းမဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မြင့်တို့၏ ဆွေးနွေးမှုအပြီး ယင်းသို့ သတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာ။ ဒီလိုမေးခွန်းမေးမြန်းတဲ့အခါ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် မိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လျော်ညီစွာပြုမူပြောဆိုဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ကိုယ်နှုတ်အမူအရာတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်”ဟု ဦးတီခွန်မြတ်က ပြောသည်။ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သည့်စီမံကိန်းလေးခုတွင် တင်ဒါမခေါ်ဘဲ ကုမ္ပဏီများကိုခွင့်ပြုပေး ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးဌာန မှားယွင်းနေကြောင်း မင်းကင်းမဲဆန္ဒနယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦး မောင်မြင့်က လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်း ခိုင်အားဝေဖန်ခဲ့ခြင်းနှင့် ကျောက် ဖြူမဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန်က ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် ခေတ်မီဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက် ပေးရေးအတွက်ဆွေးနွေးစဉ် ပို့ဆောင် ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်မျိုးကို ရမ်း ပြီးပြောဆိုကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့သဖြင့် အထက်ပါအတိုင်း သတိပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်သည့်စီမံကိန်းလေးခုတွင် တင်ဒါမခေါ်ဘဲ ကုမ္ပဏီများကို ခွင့်ပြု ပေးခြင်းသည် လျှပ်စစ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂အရလည်းကောင်း၊ အပိုဒ် ၃၃ အရလည်းကောင်း၊ နည်းဥပဒေအရ လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော် မရှင်မူဝါဒအရလည်းကောင်း တင်ဒါ မခေါ်ဘဲ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောသည်။ ”လျှပ်စစ်ဥပဒေမှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ သဘောတူညီချက် နဲ့ဆိုတာပါတယ်။ အဲဒီနောက်ကွယ်က အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဟာ ကတ်ဘိနက်တင်ရမယ်၊ လွှတ်တော်တင်ရမယ်။ ဒီဥပဒေအရ ဝန်ကြီးတို့က ဒီလိုလုပ်ပါတယ်လို့ဆိုရင် ဝန်ကြီးတို့မှားနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ စီးပွားရေးကော်မရှင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လုပ်တယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးကော်မရှင်က ဒီဥပဒေကို ကျော်လို့ရလား”ဟု မင်းကင်းမဲဆန္ဒနယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦး မောင်မြင့်က ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်း ခေတ်မီဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ရန် လတ်တလော တည်ဆောက်ပေးနိုင် သေးခြင်းမရှိသေးကြောင်း ပို့ဆောင် ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်မျိုး၏ ပြန်လည်ဖြေကြားချက်ကို ကျောက်ဖြူ မဲဆန္ဒနယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန်က ”မြို့ရဲ့တောင်ဘက် ငလ ပွေ့ဆိပ်ကမ်းဘက်က အခြေအနေ တွေကိုကျတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှင်း ပြဘဲနဲ့ မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုပဲ သာသာထိုးထိုးရှင်းပြသွားတယ်။ စူးစမ်း လေ့လာမှုတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ ရမ်းပြီးတော့ ပြောတဲ့သဘောမျိုးပြောရင်တော့ သိပ်ပြီး သဘာဝမကျဘူး”ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထမံသီ ရေအားလျှပ်စစ်စီ မံကိန်းကြောင့် ပြောင်းခဲ့ရသော ရွှေပြည်အေး ရွာသစ်တွင် လျှပ်စစ်မီး တစ်??
ကျပ်သိန်း ၈၅ဝ တန် ကားများကို တိုင်းအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ အန္တရာယ်ကင်းစွာ စီးနိုင်ရေး ဝယ်ရန်ဖြ?
အောင်မြေသာစံမြို့နယ်တွင် ခြင်ဆေးခွေထွန်းရာမှ နေအိမ်ငါးလုံး မီးလောင်